Top 6 dhuumashada SMS barnaamijyadooda si aad u ilaaliso arimahaaga gaarka ah
Top 6 Apps si ay u qariyaan fariimaha qoraalka ah iyo Ilaali Privacy
Qof walba waxa uu ku riixaya in kala si ay u qariyaan fariimaha qoraalka ah, abuse call iyo xiriirada, si kastaba ha ahaatee, hal sabab aad u badan waa in aan qabto wax dahsoon ee naga phone oo aadan rabin in dadka kale si uu u ogaado; haddii fariimaha deg dega ah tirada ay, xiriir ama la wacay, kacay oo seegay Guda yeedha. Gaar ahaan dadka ay da'doodu yartahay ay leeyihiin wax dahsoon badan oo telefoonka gacanta iyo in uu yahay daalaa dhacaya, maxaa yeelay qof kale ka arki kartaa ama ka akhriso. Hadda ma u baahan tahay si aad u shaagay ku saabsan telefoonka marka qof uu u helo inuu u ciyaaro waxey ama in ay wacaan.
Ka dib markii qaar ka mid ah barnaamijyadooda ugu caansan ahaydeen kuwo ka qariya fariimaha qoraalka ah.
1. Block SMS iyo wac
2. Space Private - qari SMS iyo xiriir
3. Xiriirada har
4. Qari SMS
SMS Block iyo wac waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan app si ay u qariyaan fariimaha qoraalka ah taas oo ka dhigaysa wax walba oo jirta idiin in mid ka mid xirmo kaliya, codsigan waxaad Qarinaysaan karo ma aha oo kaliya ama ka dhigi gaarka ah ee wacay, baaqayaa geftay, Call Log, SMS gaarka ah iyo Xiriirada gaarka ah, laakiin sidoo kale Square soo wicitaanada aan fiicneyn iyo fariimaha.
Waxay leedahay 6 qaabab ee qurbaanka, taas oo ka dhigaysa kasta oo aad u baahan tahay hubaal in hal codsi Android hal.
Sida caadiga ah, marka 'Phone gacanta kale ee hab naafo yahay, waxaa loola jeedaa in wicitaanada ah ayaa xiran / qarinaayay kaliya ka' Black List "xiriirada. On fursad off in aad u baahan tahay inay qariyaan soo socdo baaqyada ka imaanaya ayaa sidoo kale xiriir Liiska gaarka ah (waa marka aad aragto in telefoonka noqon doonaa in qof kale gacanta) aad iska badasho karaa 'Phone gacanta kale' doorasho. Dhinacyada khadadka, shaqsiyaad kale marna ma heli lahaa calls gaarka ah iyo sidoo kale, oo aad mar dambe arki kartaa Guda kuwa. Marka telefoonka waa idiin, dami element iyo aad ku fiican tahay inuu tago.
Ku dar gaar ah / xiriirkaaga gaarka loo leeyahay galay liiska ku xiga inay ku daray liiska. Dhammaan Guda call oo SMS ka tiro kuwaas oo aan la tudhay galay Guda mailkooda telephone oo wac, si kastaba ha ahaatee waxaa la lexejeclaystay meel gaarka ah iyo mid kale ma jiro waxaad ka arki kartaa kuwa.
Iyada oo xiriir kasta, waxaad geli kartaa magaceeda been abuur ah si ay u Baridaan iyo SMS ka lambarkan laga xannibo, digniin ay magac been abuur ah ku tusi doonaa ilaa bar xaaladda. By waxan u samaynaysaan mid kale ma aad yeelan karaan awood ay ku fahmaan oo la war bixin aad ka soo wacayso.
Dhammaan telefoonnada iyo SMS ka mid ah liiska lambarada madow la xakameeyo oo u dhaqaaqay meel gaarka ah.
Hab default ayaa lagu wadaa in uu "madow oo kaliya". Waxaad u bedeli kartaa in "dhammaan soo wacitaanada" oo ay waxan u samaynaysaan dhammaan soo wacitaanada & SMS marka laga reebo kuwa ku jira liiska Cad la xakameeyo iyo Guda badbaadiyey in meel bannaan oo gaar loo leeyahay.
Sababo la xiriira shaqeynta dheeraadka ah waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad ku wareejiso badan oo rukhsadda helaan aad telefoon iyo siiyey in aad raadineyso weeyna ammaanka iyo gaarka ah oo dheeraad ah, waxaase laga yaabaa in wax aad shaki ka qabaan.
Space Private waa sidaas oo kale waa inuu arji ah oo aad ku helayso ammaanka iyo inay ku Xasisho inay qariyaan xiriirada, fariimaha, abuse iyo call in aadan u baahan tahay kuwa kale si ay u arkaan. Astaanta app ee intaa la qarin karo, waxaad wici kartaa "## pin fure sir ah, (tusaale ahaan, ## 1234) si uu u furo codsigan ka dib codsi qariyo awood.
Waxaad ku qarsan kartaa app iyo ninna garan maayo ku saabsan dhuumashada.
Qari XIDHIIDH gaarka ah buugga cinwaanka nidaamka.
Xafido aad SMS & MMS ku qarinaya FARIINTA aad galay Space gaarka ah.
Qari Guda CALL qarsoodi ah oo xannibi CALL aad xasaasi ah waqtiyo xun.
DIGNIIN la 'masaasad' SMS, gariiro ama ciyaaro aad ringtone kartoo marka aad fariimaha ama telefoon. Waxaa la ogaysiinayaa in aad karaa marka farriimo cusub ama calls timaado, laakiin kaliya aad u ogaato waxa ay dhab ahaantii.
Jaf oo aad telefoon in ay xirto PrivateSpace si dhaqso ah.
Ma qarin qoraalka aad si hufan. Dhammaan waxa ay qaadataa waa browser file ah iyo farriimaha mar kale la ogan karo.
Xiriirada har waa app wanaagsan in ay qarin karaan Guda SMS una yeedha. Marka hore, waxaad u baahan doontaa si loo soo dajiyo Contact app ee har, oo ka dib markii la rakibey dhamaato, waxaa ku weydiin doonaa inaad dhigay hannaankii Unlock iyo marka aad qortid hannaankii si guul ah, waxaad ka heli doontaa dhoweeyaa meesha ugu baaqaysaa abuse, lambarada xiriirka, SMS text waxaa la qarin karaa halkaas ka.
Qari SMS iyo iska wac Guda ka barnaamijyadooda stock.
Unlock ilaalinta code (PIN ama hab).
Xulashada si ay u qariyaan app ka launcher ah (by default, wac *** 123456 ### in la furo).
Auto-qufulka (ha isticmaalin app tahay chelu naarke), auto-baabbi'in (code ka dib qalad ah mararka qaarkood), qufulka deg deg ah.
Soo Celinta wac abuse / fariin ka / in ay barnaamijyadooda stock qoraalka.
User interface wareer.
Ma aha mid aad u hufan ee qarinaya dhammaan xogta ku saabsan qalabka.
Qari SMS waa wax adag tahay in la isticmaali dhawra wada xidhay. Soo qaado Fariimaha aad u baahan tahay si ay u daboosho ilaa iyo KeepSafe iyaga xidh dib barkin PIN ah. Isticmaal Qari raalli xidh fariimaha khaaska ah. KeepSafe aad meelo gacanta ku arka waxa telefoonka aad.
Farriimaha soo socda u wada hadalka qarinaayay si toos ah u tag wareegga KeepSafe.
Waxaa jira meel bannaan ah oo aan xad lahayn, waayo, kaydinta qoraalada qarsoon.
Isticmaalka Unlimited iyo xidhid lacag la'aan ah.
Meel Unlimited kaydinta.
Suufkeeda iyo qoraallada aad si hufan.
Aad u kala qalabka taas oo app waa in lagu xiro.
Ma taageeri dhan qalabka android.
Wareegga aad caawisaa oo la xakameeyo ammaanka, ilaalinta aad sawiro, cajalado, SMS, iyo xiriirada gaarka ah, iyo iyaga oo qarinaya indhihiisa ka soo prying. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u abuuraan "xiriirada gaarka ah", kuwaas oo fariimaha iyo Guda wac la qarin doonaa shaashadda telefoonka. Wareegga ayaa sidoo kale ku dhuunto oo dhan soo socda fariimaha, digniino iyo qoraallada ka xiriirada kuwa.
Dhammaan faylasha lagu kaydin doonaa meel ammaan ah oo kaliya waxaa laga daawan karaa jeegan ka dib habayn ama tiro waxaa soo galay.
The Chine in aad doorato waa la ilaalin doonaa sirta ah. Users Premium dooran kartaa tiro aan xad lahayn ee Chine in ay xirto.
Android iyo macruufka.
Wuu SNAP ee qofka uu isku dayayo inuu furo fayl gaar loo leeyahay.
Qari yiri- icon telefoonka ee shaashadda Home. Marka hab qarsoodi waxaa firfircoonaan, icon waayi doonaa isla markaana mar kale furay kartaa adigoo gelaya sirta via pad dial telefoonka.
Waxaa u siyaadiyaa encryptions oo ka mid ah fayl maqan iyo files oo halkan, hoos heerka processing ee shaashadda guriga.
Waxa badbaadiyay SMS / MMS / Call Log ee xiriirada qarsoodiga ka dambeeya pad PIN. Si aad farriimaha qarsoodiga oo ku baaqay nambarada gaar ah, waxaa ka mid ah sida Contact gaarka ah. Hadii ka dib marka kasta oo fariin cusub ka yimaado xiriir cusub, waxaa straightforwardly guuro gudaha codsiga. Waa sahlan tahay in ay isticmaasho oo ku hayaa wada hadal macmiilka qarsoodiga ah.
Your SMS una yeedha wada hadalka waa 100% qarsoodi ah oo aamin ah.
Farriimaha soo socda / xilka si toos ah u qarin doono. Waxaad astaysto gaadhsiin icon / dhawaaqa.
Wac "1234" (Password Default) in la furo codsiga.
Waxa kale oo ay bixisaa qoraalka free dhexeeya Users App. Just Saxiix-In la lambarka. U dir qoraal, maqal ah, sawirka iyo meesha faahfaahin aan xad lahayn si user kale.
Ilaa 300 characters emoji uu ka soo xusho.
Waxa kale oo uu leeyahay saacad taas oo si toos ah ay xirtey codsiga waqti cayiman ka dib.
Arjiga ka heli kartaa kharribeen marar aad u badan. Haddii ay sidaa tahay, la casriyeeyo si version ugu dambeeyay oo aad ku fiican tahay inuu tago.
Siduu u Asturo Text Message on iPhone Kulanka Xiisaha Leh
Tallaabada 1 : Open "Settings" iyo garaac "Notifications".
Talaabada 2 : Dooro "Messages" iyo simbiriirixan "Show Kulanka Xiisaha Leh" in OFF.
Talaabada 3 : Exit ka mid ah Settings sida caadiga ah iyo isbedel dhaqan isla markiiba.
Top 20 dib u eegista ciyaaryahan GOM iyo waxyaabaha kale ee
Top 6 eBook Shabakadaha in Download Free eBooks
> Resource > Top List > Top 6 Apps dhuumashada SMS to Protect Your Privacy